कोरोनाबाट मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग - नेपालबहस
कोरोनाबाट मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग
| १२:१४:४२ मा प्रकाशित
२१ जेठ,फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले कोभिड—१९ संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै गाउँपालिकाले कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु हुने परिवारलाई रु २५ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कोभिड—१९ संक्रमित भएर लामो समयसम्म आइसोलेसनमा बस्ता आर्थिक समस्या आउने भएकाले सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी दुम्वापोले बताइन् । उनले भनीन्,“कोभिड—१९ संक्रमितलाई पौष्टिक आहार फलफूल, चना, अण्डा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थियौं । कसैको घरमा गुजारा चलाउनै समस्या भएको छ । त्यसैले नगद उपलब्ध गराइयो भने आफ्नै आवश्यताअनुसार खर्च गर्न सक्ने भएकाले नगद प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो ।”
गाउँपालिकामा सक्रिय कोभिड संक्रमित ३३ जना रहेको र १० जना निको भइसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख फुर्वा शेर्पाले बताए । कोभिड संक्रमणबाट एकको मृत्यु भएको छ ।
खानेपानीको पाइप बिछ्याउन नागरिकबाट श्रमदान १० घण्टा पहिले
चुरे क्षेत्रमा अवैध ढुङ्गागिट्टी उत्खनन गर्ने ५ टिपर नियन्त्रण २ हप्ता पहिले
आज कोरोनाले थप १ सय ९३ जनाको मृत्यु, ७९१४ संक्रमित ४ हप्ता पहिले
बैंकका सवारीसाधन बिहान र बेलुका १/१ घन्टा मात्र चल्न पाउने ४ हप्ता पहिले
पाँच हाइड्रो र तीन फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए, कुनले कति ? २ हप्ता पहिले
दवावमा छन् ओली, अब कुन फण्डा प्रयोग गर्लान् ? ८ महिना पहिले
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न ८ महिना पहिले
वाग्मती सफाइ महाअभियान : ४००औँ हप्तालाई विशेष बनाइन तयारी शुरु ७ महिना पहिले